Ity tranonkala ity dia iasan'ny Trivoshop.com. Mandritra ny tranokala, ny teny hoe "we", "us" ary "our" dia manondro ny Trivoshop.com. Trivoshop.com dia manolotra an'ity tranonkala ity, ao anatin'izany ny fampahalalana, fitaovana ary serivisy rehetra azo zahana amin'ity tranokala ity ho anao, ny mpampiasa, miankina amin'ny fanekenao ny fepetra rehetra, ny fepetra, ny politika ary ny fanamarihana voalaza eto.
Amin'ny alalan'ny fitsidihana ny toerana sy / na mividy zavatra avy taminay ianareo anjara amin'ny "Service", ary manaiky ho voafatotry ny manaraka fepetra ( "Terms amin'ny Service", "Terms"), anisan'izany ireo tsy ampy amin'ny teny sy ny toe-javatra sy ny politika hanovozan-kevitra Izao ary / na misy ny rohibe. Ireo fepetram-Service ampiharina amin'ny rehetra mpampiasa ny vohikala, anisan'izany ny tsy misy fetra mpampiasa izay navigateur, mpivarotra, mpanjifa, mpivarotra, ary / na ny mpandray anjara ny votoaty.
Vakio ireo fepetram-Service tsara alohan'ny fahazoana na fampiasana ny tranonkala. Ny fahazoana na fampiasana anjara amin'ny toerana, ianao manaiky ho voafatotry ireo fepetram-Service. Raha tsy manaiky ny rehetra ny fepetra fifanarahana ity, dia mety tsy mahazo ny vohikala, na mampiasa misy asa. Raha fepetram-Service ireo dia heverina ho tolotra, dia mazava fanekena voafetra ho ireo fepetram-Service.
Izay mety ho endri-javatra vaovao na ny fitaovana izay nanampy ny amin'izao fotoana izao ihany koa ny fivarotana dia ny hanekentsika ny fepetram-Service. Afaka hijery indray ny tena amin'izao fotoana izao dikan-fepetram-Service amin'ny fotoana rehetra amin'ity pejy ity. Isika hitehirizany ny zo vaovao farany, manova na hanolo anjara ireo fepetram-Service amin'ny alalan'ny famoahana fanavaozam-baovao sy / na ny fanovana amin 'ny tranonkala. Izany no andraikitra mba hijery ity pejy ity tsindraindray ho an'ny fiovana. Ny mbola fampiasana na ny fidirana amin'ny vohikala manaraka ny fandefasana ny fanovana ireo mahaforona ny fanekena ny fiovana.
FIZARANA 1 - ONLINE STORE TERMS
Rehefa nanaiky ireo fepetram-Service, dia maneho fa ianao, fara fahakeliny, ny taona maro an'isa ao amin'ny fanjakana na ny faritany-ponenana, na hoe ianao no taona maro an'isa ao amin'ny fanjakana na ny faritany ponenana, ary efa nanome antsika ny manaiky ny mamela misy ny tsy ampy taona mba hampiasa dependents ity tranokala ity.
Mety tsy mampiasa ny vokatra na inona na inona tsy ara-dalàna na tsy nahazoan-dalana tanjona na mety ianao, eo amin'ny fampiasana ny Service, mandika lalàna misy eo amin'ny fahefana (anisan'izany fa tsy voafetra ho lalàna zon'ny mpamorona).
FIZARANA 2 - general NATREHINAY
FIZARANA 3 - araka ny marina, feno SY fotoana nilany azy-TOROHAY
FIZARANA 4 - ny fanovana ny asa fanompoana sy ny vidiny
FIZARANA 5 - vokatra na ny tolotra (raha azo atao)
Efa nanao ny ezaka rehetra mba haneho araka izay marina tsara araka izay azo atao ny loko sy sary ny vokatra izay miseho amin'ny fivarotana. Tsy afaka manome antoka fa ny solosaina Monitor ny fanehoana misy loko dia ho marina.
FIZARANA 6 - araka ny marina BILLING SY NY TANTARA INFORMATION
Raha mila tsipiriany, azafady handinika ny Returns Policy.
FIZARANA 7 - tsy voatery TOOLS
Mety koa isika, amin'ny manaraka, manolotra asa vaovao sy / na ny endri-javatra amin'ny alalan'ny tranonkala (ao anatin'izany, ny famotsorana ireo fitaovana vaovao sy ny loharanon-karena). Toy izany endri-javatra vaovao sy / na ny asa dia ho ambany koa ireo fepetram-Service.
FIZARANA 8 - X-PARTY LINKS
Isika tsy mendrika na inona na inona loza na fahavoazana mifandray amin'ny fividianana na ny fampiasana ny fananana, asa, loharanon-karena, afa-po, na hafa varotra natao mifandray amin'ny antoko na fahatelo-tranonkala. Mba hijery tsara ny fahatelo-ny antoko politika sy ny fomba fanao ary makà antoka fa azonao izy ireo eo anatrehanao manao raharaham-barotra rehetra. Fitarainana, fitarainana, ny olana, na fanontaniana momba ny antoko fahatelo-vokatra tokony havantana amin'i fahatelo-antoko.
FIZARANA 9 - USER COMMENTS, tamberina SY OTHER anjara
Raha toa, amin'ny ny fangatahanay, dia mandefa sasany manokana fandraisana anjara (ohatra fifaninanana anglisy), na raha tsy misy fangatahana avy aminay no mandefa famoronana hevitra, soso-kevitra, tolo-kevitra, fikasana, na fitaovana hafa, na amin'ny aterineto, amin'ny alalan'ny mailaka, amin'ny alalan'ny paositra taratasy, na raha tsy izany (miaraka, 'hevitra'), dia manaiky fa mety, amin'ny fotoana rehetra, tsy misy fameperana, Ovay, kopia, torio, mizara, ary raha tsy izany mandika na izany na tsy mampiasa fitaovana misy fanehoan-kevitra izay handroso ho anay. Ary izahay dia Tsy voatery (1) foana izay fanehoan-kevitra ny fahatokiana; (2) handoa onitra na inona na inona hevitra; na (3) mba hamaly misy fanehoan-kevitra.
Mety, nefa tsy manana adidy, Monitor, Ovay, na manala votoaty fa mamaritra ao amin'ny hany fisainana mazava dia tsy ara-dalàna, manafintohina, mandrahona, manala baraka, manala baraka, vetaveta, vetaveta, na raha tsy izany dia zavatra manafintohina, na mandika misy antoko ny fananana ara-tsaina, na ireo fepetram-Service .
FIZARANA 10 - manokana
FIZARANA 11 - fahadisoana, INACCURACIES SY fanadinoana
FIZARANA 12 - voarara fampiasana
Ankoatra ny fandraràna hafa araka izay voalaza ao amin'ny fepetram-Service, ianao dia voarara tsy hampiasa ny toerana na ny votoatiny: (a) na inona na inona antony ara-dalàna; (B) mba mangataka ny hafa mba hanao na handray anjara amin'ny asa ara-dalàna rehetra; (C) ny mandika na iraisam-pirenena, federaly,-paritany na fanjakana fitsipika, fitsipika, lalàna, na ny fitsipika ao an-toerana; (D) ny hitsabaka amin 'na handika ny zon'ny fananana ara-tsaina, na ny fananana ara-tsaina zon'ny hafa; (E) mba mampijaly, ny fanararaotana, ompa, loza, manala baraka, fanendrikendrehana, hitsikera, hampitahorana, na manavakavaka miorina amin'ny lahy sy ny vavy, fironana ara-pananahana, ny fivavahana, ny foko, firazanana, taona na fireneny, na fahasembanana; (F) ny hanaiky diso na mamitaka vaovao; (G) ny mampakatra, na mamindra virosy, na zavatra hafa mampidi-doza karazana fehezan-dalàna izay na mba azo atao amin'ny zavatra lalana izay hisy fiantraikany ny fahafaha-miasa na ny asa ao amin'ny Service na ny misy mifandray tranonkala, vohikala hafa, na ny Internet; (H) mba hanangona na manara-maso ny mombamomba ny olon-kafa; (I) ny spam, phish, pharm, fiolahana, hala, nandady, na hofafako hiala; (K) na inona na inona vetaveta na haloto fitondran-tena tanjona; na (k) mba hanelingelina na hihodidinana ny fiarovana lafin-javatra ao amin'ny Service na mifandray tranonkala, vohikala hafa, na ny Internet. Isika hitehirizany ny zo hamarana ny fampiasana ny Service na mifandraika amin'ny tranonkala noho ny fandikana akory va ny voarara ampiasainy.
FIZARANA 13 - DISCLAIMER NY fiantohana; Mahasakana NY madio
Manaiky ianao fa mazava ny fampiasana, na ny tsy fahafahany mampiasa, ny fanompoana dia eo hany mety. Ny asa fanompoana sy ny vokatra sy ny tolotra natolotro anareo amin'ny alalan'ny asa fanompoana dia (afa-tsy toy ny mazava ny voalazan 'antsika) nanome' toy ny 'sy' toy ny misy "noho ny fampiasana, tsy misy solontena, fiantohana na fepetra na inona na inona, na maneho na Te hilaza, anisan'izany Te hilaza fiantohana na ny toe-javatra ny merchantability, merchantable toetra, Fitness ho tanjona iray manokana, mateza, anarana, ka tsy fandikan-dalàna.
Na izany na tsy izany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny ratra, fahaverezana, fangatahana, na mivantana, tsy mivantana, sendra, manasazy, manokana ny Trivoshop.com, ny talen'ny, tompon'andraikitra, ny mpiasa, ny mpiara-miasa, ny mpandraharaha, ny mpampiofana, ny mpamatsy, ny mpamatsy, ny mpamatsy, ny mpamatsy tolotra na ny mpanome lisansa. , na fahasimbana vokatr'izany amin'ny karazana rehetra, ao anatin'izany, tsy misy fetrany ny tombom-barotra very, ny fidiram-bola very, ny tahiry very, ny fahaverezan'ny data, ny vidin'ny fanoloana, na ny fahasimbana mitovy amin'izany, na mifototra amin'ny fifanarahana, tort (ao anatin'izany ny tsy fitandremana), tompon'andraikitra henjana na amin'ny fomba hafa. avy amin'ny fampiasanao ny serivisy na ny vokatra azo tamin'ny alàlan'ny serivisy, na ho an'ny fangatahana hafa mifandraika amin'ny fomba fampiasanao ny serivisy na ny vokatra rehetra, ao anatin'izany, fa tsy ferana amin'ny, lesoka na hadisoana amin'ny atiny rehetra, na fatiantoka na fahasimbana na karazan'antoka na inona na inona vokatry ny fampiasana ny serivisy na ny atiny (na vokatra) navoaka, navoak, na azo natao tamin'ny alàlan'ny serivisy, na dia notoroana hevitra momba ny fahafaha-manao aza izy ireo. Satria ny fanjakana na ny faritra sasany dia tsy mamela ny fanilihana na ny fetran'ny andraikitra noho ny fahasimbana vokatr'izany na eo an-toerana, amin'ny fanjakana na faritra toy izany, ny adintsika dia voafetra amin'ny fetra farany lehibe avelan'ny lalàna.
FIZARANA 14 - tamby
Manaiky ianao handoa onitra, hiaro ary hihazona Trivoshop.com tsy manimba sy ny ray aman-dreninay, ny zana-kazo, ny mpiara-miasa, ny mpiara-miombon'antoka, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpandraharaha, ny mpifaninana, ny mpamatsy vola, ny mpamatsy tolotra, ny mpamatsy vola, ny mpamatsy, ny mpampiofana ary ny mpiasa, tsy misy atahorana na inona na inona fangatahana na fangatahana, ao anatin'izany ny saram-pandresen'ny mpisolovava mety, ataon'ny antoko fahatelo noho ny fanitsakitsahana ireo fepetra momba ny serivisy ireo na ny antontan-taratasy ampidirin'izy ireo amin'ny alàlan'ny referansa, na ny fandikana lalàna na zon'ny antoko fahatelo.
FIZARANA 15 - fanamaroana
Ao ny zava-nitranga fa ny fandaharana ireo fepetram-Service dia tapa-kevitra ny ho ara-dalàna, foana na unenforceable, izany fandaharana dia Na izany aza ho ampiharina araka izay fara heriko navelan'ny azo ampiharina ny lalàna, ary ny unenforceable anjara dia heverina ho hosarahina hiala ireo fepetram- Service, tapa-kevitra toy izany dia tsy misy fiantraikany ny mampanan-kery sy ny enforceability ny hafa sisa vatsy.
FIZARANA 16 - famaranana
Ireo fepetram-Service dia mahomby raha tsy ary mandra-faranana amin'ny alalan'ny na ianareo na izahay. Azonao afaka mampitsahatra ireo fepetram-Service amin'ny fotoana rehetra ny mampahafantatra antsika fa tsy maniry ny hampiasa ny Services, na rehefa mitsahatra mampiasa ny toerana.
Raha eo amin'ny hany fitsarana anao tsy, na dia miahiahy fa tsy nahomby, ny manaraka misy teny na vatsy ireo fepetram-Service, isika, koa afaka mampitsahatra izany fifanarahana amin'ny fotoana rehetra tsy filazana ary ianareo dia hijanona mendrika ho an'ny rehetra, vola noho ny ny ary anisan'izany ny daty famaranana; ary / na mety handà anao araka ny miditra ao amin'ny Services (na ampahany aminy).
FIZARANA 17 - manontolo fifanarahana
Ny tsy fahombiazana isika mba hampihatra na hampihatra izay tsara na vatsy ireo fepetram-Service dia tsy midika ho fanafoanana ny zo na ny fandaharana toy izany.
Ireo fepetram-Service sy misy politika na fandidiana fitsipika navoakan'i anay ao io toerana na amin'ny fanajana ho amin'ny fanompoana mahaforona manontolo fifanarahana sy ny fifankahazoana eo aminao sy ny anay ary hitantanana ny fampiasana ny tolotrasa no manolo ireo aloha na contemporaneous fifanarahana, fifandraisana sy ny tolo-kevitra , na am-bava na an-tsoratra, eo aminao sy izahay (ao anatin'izany, fa tsy voafetra ho, na aloha dikan 'ny fepetram-Service).
Izay mety ho ambiguities ao ny hevitry ny nofy ireo fepetram-Service dia tsy ho voazava manohitra ny fandrafetana antoko.
FIZARANA 18 - FILAN-LALANA
Ireo fehezan-dalàna momba ny serivisy ireo sy ny fifanarahana hafa izay manome anao ny serivisy dia hitondrana sy adika mifanaraka amin'ny lalàn'i
FIZARANA 19 - fanovana fepetra fampiasana
Afaka hijery indray ny tena amin'izao fotoana izao dikan-fepetram-Service amin'ny fotoana rehetra amin'ny ity pejy.
Hitehirizany ny marina isika, amin'ny fisainana mazava ny hany, ny vaovao farany, manova na hanolo anjara ireo fepetram-Service amin'ny alalan'ny famoahana ny vaovao farany sy ny fanovana amin 'ny tranonkala. Izany no andraikitra mba hahitana ny tranonkala tsindraindray ho an'ny fiovana. Ny mbola fampiasana na ny miditra ao amin'ny vohikala, na ny Fanompoana manaraka ny fandefasana ny fanovana ireo fepetram-Service mahaforona fanekena ny fiovana ireo.
FIZARANA 20 - fifandraisana vaovao
Fanontaniana momba ny fepetram-Service tokony naniraka ho aminay any [email voaaro]